Himalaya Dainik » साप्ताहिक राशिफल: यो साता निकै फलिफाप छ ४ राशिको भाग्य !
साप्ताहिक राशिफल: यो साता निकै फलिफाप छ ४ राशिको भाग्य !
बैसाख १२ गते देखि १८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष– यात्राको तय हुने एवं वैदेशिक काममा प्रगति हुनेछ । नयाँ पारिवारिक जमघट रहनेछ । प्रेममा प्रगति एवम ससुराल पक्षबाट फाइदा मिल्नेछ । व्यवसायिक यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । साताको मध्यमा भने काममा अवरोध आउने तथा गुप्त शत्रुले काम बिगार्नेछन् । अपमानको भय हुनेछ ।
वृष–विरोधीहरुले काममा वाधा दिन सक्नेछन् । साताको मध्यमा भने व्यापारमा फाइदा एवं परिवारमा खुशियाली बढ्नेछ । नयाँ वस्तुको प्राप्ति एवं कृषि तथा चौपायाबाट आम्दानी आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने सुरु गरेको काम रोकिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा अनावश्यक खर्च बढ्नेछ । काम र जिम्मेवारीमा अनावस्यक आलोचना हुनेछ।
मिथुन– कला, संगितमा रुचि जानेछ। कृषिबाट राम्रो आम्दामी हुनेछ ।खेलकुदमा सफलता मिल्ने तथा स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउनेछ। विरोधीहरुको भय हट्ने तथा मनमा आत्मबल बढ्नेछ। साताको अन्त्यमा भ्रमण हुनेछ घुमघाममा धनको बढी व्यय हुनेछ। नया साथीभाइ भेटघाट रहने तथा व्यापार व्यवसायमा सन्तुष्टि मिल्नेछ ।
कर्कट –घरायसी आपसी सरसल्लाह नमिल्नाले सरकारी काम रोकिनेछ। जग्गाजमिनको विवाद एवम मानसिक तनाव बढ्नेछ। साताको मध्यमा भने आयश्रोत बढ्नेछ । राजनीतिमा नया काम मिल्नेछ। विद्यामा रुचि जाने एवं सन्तानको माया मिल्नेछ। साताको अन्त्यमा भने काममा समस्या आउनेछ।
सिंह– भाइभाइको सहयोग मिल्ने तथा काममा बोझ थपिनेछ । नयाँ ठाउँको भ्रमण हुने तथा वादविवाद पर्न सक्नेछ । घरमा कुरा नमिल्नाले अरुले फाइदा लिनेछन् । भोजनको गडबडीले स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने सन्तानको सहयोग मिल्ने, विद्यामा प्रगति तथा धनसम्पतिको कारोबारमा वृद्धि हुनेछ।
कन्या –धन सम्पत्तिको कारोबार बढ्ने एवम छोटो यात्राको तय हुनेछ । नयाँ लगानीमा मानसिक आत्मबल बढ्नाले काम छिटो पुरा हुनेछ । दाजुभाइबीच सहकार्य रहनेछ । साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक समस्या एवं मानसिक अशान्ति बढ्नेछ । सरसल्लाह नमिल्नाले योजनामा अवरोध आउनेछ ।
तुला –नया साथिहरु संग यात्रा एवं मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । नयाँ मित्र भेटघाट एवम साथीभाइसँग घुमफिर रहनेछ । भोजभतेरमा सहभागिता भइने एवं व्यापार व्यवसायमा सन्तुष्टि मिल्नेछ । पैसाको सहयोग आउने तथा साताको अन्त्यमा भने विदेश सम्बन्धि कामबाट फाइदा एवं जिम्मेवारी थपिनेछ ।
वृश्चिक– आर्थिक कारोबार घट्ने एवं यात्रामा समस्या आउन सक्नेछ । आश्वासनमा आघात पुग्नेछ । साताको मध्यमा भने काममा प्रगति हुने, पारिवारिक सहयोगम मिल्ने र धन सम्पतिको योगमा वृद्धि हुनेछ । वैवाहिक कुरा चल्ने तथा इष्टमित्रसँग सम्बन्ध बढ्नेछ । सन्तोष मिल्नेछ । सवारी साधनको सुख मिल्ने तथा सन्तानको प्रगति देखिन्छ ।
धनु– कृषि चौपायबाट आम्दानीको स्तर बढ्नेछ । वैदेशिक धनसम्पतिको सहयोग मिल्ने एवम आकश्मिक लाभ पाइनेछ । साताको मध्यमा भने सञ्चित धनको नाश एवम विमारमा खर्च हुन सक्नेछ । स्वास्थ्यले धोका दिने एवं काममा बाधा आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने आफन्तको सहयोग मिल्नाले पुरानो काममा फाइदा हुनेछ ।
मकर – व्यापारमा कम फाइदा मिलेपनि मित्रबाट सरकारी धनको फाइदा हुनेछ। राजनीतिमा जिम्मेवारी थपिने एवं मानसम्मानको योग रहेको छ । सरकारी काममा प्रशंसा मिल्नाले अरुको नजरमा परिनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रगति एवम भोगविलासमा खर्च हुनेछ । नयाँ मित्रसँग भेटघाट एवम आँटेको काममा फाइदा मिल्नेछ ।
कुम्भ– नयाँ लगानीमा व्यस्तता बढ्नेछ। सेवामुखीकाममा धनको उपयोग हुनेछ । धार्मिक भावना आउनेछ । परोपकारमा मन जाने एवम सामाजिक काममा व्यस्तता बढ्नेछ । वैदेशिक कामबाट फाइदा मिल्ने एवं ठुलाबडाको साथ मिल्नेछ । राजनीतिमा पहुँच बढ्ने तथा काराबारमा वृद्धि हुनेछ ।
मीन– स्वास्थ्यमा समस्या एवम काममा अवरोध मिल्नेछ । पद प्रतिष्ठामा आलोचनाको भय रहनेछ । साताको मध्यमा भने लामो यात्राको तय हुने एवं धर्म कर्ममा खर्च हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने सरकारी क्षेत्रमा फाइदा नोकरीबाट लाभ एवम काममा प्रतिष्ठा मिल्नेछ ।
छात्रावासमा बसेकी १५ बर्षिया प्रतिमाको मृत्यु
११ तस्बिरमा हेर्नुहोस् ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स’की विजेता सुमीको सुन्दरता
मरिचमान सिंह यस्ता प्रधानमन्त्री, जो राजनीतिबाट अलग बसे तर देश बेचेनन् !
बैशाख ५ गतेबाट उदायो शुक्र, यी राशीको भाग्य चम्किलो !
‘भ्वाइस अफ नेपाल’का पहिलो विजेता विजय वैवाहिक जिवनमा बाँधिए…
यी ५ राशिका व्यक्तिले हातमा रातो रङ्गको धागो बाँध्नु मानिन्छ शुभ
निकै हट लुक्समा देखिइन् नायिका निया [फोटो फिचर]
दाउन्नेमा बस खस्यो
ठूला सहरका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने सीसीएमसीको सिफारिस
४१५२ मा परीक्षण गर्दा ५३४ लाई कोरोना, पाँचको मृत्यु
ओलीलाई हटाउन केन्द्र देखि प्रदेशसम्म प्याकेजमै सहमतिको प्रयास